ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကဘာလဲ - SAM ကို-ဗြိတိန်
Taizhou ပလတ်စတစ်ပူးတွဲ zhuoxin ။ , LTD သည့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
Wood က & သံ vs ဗီနိုင်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကဘာလဲ
ဗီနိုင်း Picket ခြံစည်းရိုး
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Panel များ
ဗီနိုင်းစိုက်ပျိုး Box ကို
ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ် Post ကို
ဗီနိုင်း Post ကိုစာလုံးကြီး
ဗီနိုင်း Picket စာလုံးကြီး
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး Post ကို
ဗီနိုင်း Pocket ရထား
ဗီနိုင်း U-Channel ကို
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-02 မူလ:ဆိုက်ကို
ဗီနိုင်း Ethylene နှင့်ကလိုရင်း (သဘာဝတ္ထုများဖြစ်ကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏) မှဖန်ဆင်းတဲ့ဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီတ္ထုများကိုလည်းလေ့ "ဗီနိုင်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသော PVC, အဖြစ်လူသိများ polyvinyl Chloride, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယနေ့ဗီနိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကမ်ဘာပျေါတှငျ 2nd အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချပလပ်စတစ်ဗဓေလသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီနိုင်းများ 76% အဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်ကို ထောက်. ဗီနိုင်းလည်း "အခြေခံအဆောက်အအုံပလပ်စတစ်" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး PVC (polyvinyl chloride တို့) နဲ့လုပ်ပလပ်စတစ်ခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ PVC ဗဓေလသစ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသက်ရောက်မှုခွန်အားနှင့်ကြာရှည်ခံမှုခြွင်းချက်ပေးသောအထူးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။
သငျသညျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါအထူးသဖြင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးပစ္စည်းများအတွက်အလွန်တတ်နိုင် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေရှည်မှာခုနှစ်, အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်သစ်သားနှင့်သတ္တုထက်နိမ့်သည်။ သင်ခြံစည်းရိုး (သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်း) ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အသက်ရှည်ဆင်ခြင်သောအခါအထူးသဖြင့်, ထိုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုသင်အချိန်, အားထုတ်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်, ဆေးသုတ်ဘို့အအစွန်းအထင်းပေးဆောင်ရန်မလိုပါ, သင်ခြံစည်းရိုးပြောင်းလဲနေတဲ့စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးမြင့်မားသိပ်သည်းဆတစ်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်မရှိအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူမရှိ, အရည်ကြည်ဖု, အဘယ်သူမျှမချေးရှိပြီး, လဲကျရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ လက်ရှိတွင်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (TiO2) ကိုဗီနိုင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးထက်ပိုအကျိုးရှိသောထို့အပြင်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အခြေခံခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုပေးခြင်းအားဖြင့်, ဒီအလွန်ဗီနိုင်းအတားအဆီးအလွှာ၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းထုတ်ကုန်၏အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းမှုနဲ့လောင်သောအသံကာကွယ်ပေးသည်။
အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်သင်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကကိုယ့်ကိုကိုယ် install လုပ်နိုင်ပါတယ်လွယ်ကူပါတယ်။ အများစုမှာအစိတ်အပိုင်းများကိုလျှောခြင်းနှင့်အရပ်သို့သော့ခတ်လျက်, Struts ရှုပ်ထွေးခြေလှမ်းများမရှိဘဲမြေပေါ်မှာမှ fixed ရပါမည်ပါလိမ့်မယ်။ ခြံစည်းရိုးကို install တစ်ချိန်က Plus အား, သငျသညျပန်းချီသို့မဟုတ်ဆေးဆိုးစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်မှာအားလုံးကစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ တကယ်တော့ဒါဟာနီးပါးမျှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်! သငျသညျဆေးဆိုးဒါမှမဟုတ်သင်သစ်သားခြံစည်းရိုးပေါ်လိုအဖြစ် repainting စိုးရိမ်ရန်မလိုပါဒါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးသူ့ဟာသူတစ် set ကိုအရောင်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်, အထက်ပါထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤသည်စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတများကိုကယ်တင်ချင်သောသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးရှိသမျှတို့ကိုအကျိုးကျေးဇူးများအနက်, ဒီကရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
·ဗီနိုင်းနဲ့အခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦး Eco-friendly ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်: ကပတ်ဝန်းကျင်သို့အောက်ပိုင်းထုတ်လွှတ်မှုလုပ်များနှင့်လွှတ်ပေးဖို့လျော့နည်းစွမ်းအင်လိုအပ်သည်။
·ဗီနိုင်းကားပုပ်ပျက်တတ်နှင့် bug ခံနိုင်ရည်ပါဘူး
အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအကွောငျးဘာ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးမိတ်ဆက် ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအကျိုးကျေးဇူးများ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏အားသာချက်များ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
အကြောင်းအရာ ！ ဗလာဖြစ်နေသည်
Taizhou Zhuoxin ပလတ်စတစ် @ မူပိုင် 2018 ။ All rights reserved ။